Diane ဗွန် Furstenberg ၏အမေရိကန်အမှတ်တံဆိပ်သို့သော်ကမ္ဘာတဝှမ်းဖက်ရှင်အကြားထိုက်ထိုက်တန်တန်ရေပန်းစားသည်အရာ, အတော်လေးစျေးကြီးထုတ်ကုန်လွှတ်တင်။ ဒီနာမည်ကျော်ထုတ်လုပ်သူအားလုံးထုတ်ကုန်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လက်တွေ့နှင့်ဘက်စုံသုံးကွာခြားပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာယင်း၏ပိုင်ရှင်များ၏ပုံရိပ်ကိုစတိုင်နဲ့ sexy ပါစေ။ ကုန်ပစ္စည်းလိုင်း Diane ဗွန် Furstenberg ခေတ်မှီဆင်မြန်းနှင့်အခြားအဝတ်အစားအဖြစ်ဖိနပ်, လက်ကိုင်အိတ်များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ရေမွှေးများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာပါစေ။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပုံပြင် Diane ဗွန် Furstenberg
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမှတ်တံဆိပ်၏နာမတော်ကိုတည်ထောင်သူ Diane ဗွန် Furstenberg မိန်းမတို့အဘို့ဒီဇိုင်နာအဝတ်အစား၎င်း၏ပထမဦးဆုံးလိုင်းဖွင့်လှစ်သောအခါ, 1970 ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ကျော်ကြားတဲ့ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာယနေ့ဂျူးအမြစ်များရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မူလကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ, ပြီးတော့ပြင်သစ်၌စတင်ခဲ့သည်။
Diane ဗွန် Furstenberg အလွန်လျင်မြန်စွာနှောင်းပိုင်းနှစ်ဆယ်ရာစုဥရောပဖက်ရှင်အနိုင်ရ။ သူမ၏ရန်အဆက်မပြတ်ချုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မူလစားဆင်ယင်တူအောင်ဖန်တီးပေးဖို့တောငျးဆိုခကျြမြားနှငျ့အကျော်ကြားဆုံးအမျိုးသမီးဝင်ရောက်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အောင်မြင်မှုလာမယ့်တာရှည်မဟုတျပါဘူး။
အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်ဒိုင်ယန်းဗွန် Furstenberg လည်းအလှကုန်ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ 2001 ခုနှစ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ဖက်ရှင်တစ်ခုအမေရိကန်ဘီလျံနာ Barry Diller လက်ထပ်နှင့်တစ်နှစ်အကြာတွင်လက်ခံရရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ် ။ ထိုအချိန်မှစ. အမှတ်တံဆိပ် Diane ဗွန် Furstenberg ဥရောပမှာဒါပေမယ့်လည်းအမေရိကတိုက်၌မသာအလွန်အမင်းလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။
ယနေ့ Diane ဗွန် Furstenberg - သူ့ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်အိမ်၏နာမည်ကြီးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ, ပိုင်ရှင်နှင့်တည်ထောင်သူသာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းအမေရိကန်ကောင်စီသမ္မတ။
အဝတ်အစား Diane ဗွန် Furstenberg
အများဆုံး Diane ဗွန် Furstenberg အဆိုအရသူမ၏ပထမဦးဆုံးမော်ဒယ်များမှာအထူးလုံးဝဘာမျှမခဲ့ - သူတို့အင်္ကျီလက်နှင့်အတူထည်၏သာမန်အပိုငျးပိုငျးရှိကြ၏။ ဤအတောအတွင်း 1972 ခုနှစ်တွင်ဒိုင်ယန်းဗွန် Furstenberg ၏လိုင်း၌ထငျရှားသောအနံ့, ဒါမှမဟုတ်ထုပ်ပိုးပြီး-စားဆင်ယင်, အတူစားဆင်ယင်-ကုတ်အင်္ကျီ, အရောင်းအပေါငျးတို့သဖြစ်နိုင်သောမှတ်တမ်းများကိုဖဲ့။
ထဲမှာပါတဲ့၏ထို့အပြင်နှင့်အတူသဘာဝအဝါဂွမ်း - ဤစားဆင်ယင်မျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့ထည်ကနေဖန်ဆင်းတော်ခံခဲ့ရသည်။ ဒါဟာအရာများ၏အောက်လိုင်းကိုခါးကိုကြိုးနဲ့တုတ်နှစ်ကြိုးကို အသုံးပြု. အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်, တစ်ဦးမျှမျှတတပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖြတ်ခြင်းနှင့် silhouette "hourglass" ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖက်ရှင်ဝတ်စုံဖယ်ရှားဝတ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အနေဖြင့်ပစ္စည်းနီးပါးတှနျ့ဆုတျ, ကမယုံနိုင်လောက်အောင်အဆင်ပြေပြေနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အောင်ကြောင့်အချိန်ဖက်ရှင်အမြိုးသမီးမြားကိုချက်ချင်း, အအသစ်အဆန်းတန်ဖိုးထား။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Diane ဗွန် Furstenberg ၏အမည်ကိုလုံးဝဖက်ရှင်လောကနှငျ့လုပ်ဖို့ကအနည်းဆုံးတစ်ခုခုသူလူများအပေါင်းတို့သည်လေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အသစ်တခုအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖက်ရှင်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်ဒါကြောင့်နာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်စတင်ကတည်းက။
ကော့တေး, ညဦးယံအချိန်, ရုံး, တင်းကျပ်စွာ-သငျ့, ပေါ့ပေါ့နဲ့တခြားသူတွေ - ယနေ့, ဒီအမှတ်တံဆိပ်များစုဆောင်းခြင်းတိုင်းအရသာကိုက်ညီမှဆင်မြန်း၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ထုတ်လုပ်သူထိပ်နှင့်အင်္ကျီ, စတိုင်, အင်္ကျီဝတ်စုံနှင့်ယေဘုယျအားအဝတ်နှင့်ဘောင်းဘီရှည်, အကျီ, cardigans, အကျီနဲ့အင်္ကျီခေတ်မှီအဖြစ် fused နှင့်ရေချိုးဝတ်စုံနှင့် beachwear သီးခြားထုတ်လုပ်သည်။
ဖိနပ် Diane ဗွန် Furstenberg
"အမေရိကန်ခိုခို Chanel" မကြာခဏစာနယ်ဇင်း Diane ဗွန် Furstenberg အတွက်ရည်ညွှန်းသည်စပျစ်သီးနှင့်ခေတ်သစ်နွေရာသီဖိနပ်ထုတ်လုပ်သည်။ သူမ၏စုဆောင်းမှုအတွက်ခုံဖိနပ်, ခြေနင်းများနှင့်ခြေနင်းပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်နှင့်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်ဖက်ရှင်ယနေ့ဘဲလေးတိုက်ခန်းနှင့်ရှိပါတယ် espadrilles ။
အားလုံးဖိနပ်အမှတ်တံဆိပ်မိန်းကလေးများနှင့်အမျိုးသမီးတစ်မူထူးခြားသောကျက်သရေနှင့်ကျက်သရေပေးသည်နှင့်, မှတပါး, အလွန်မြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုကွာခြားပါတယ်။
လက်ကိုင်အိတ်များနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်း Diane ဗွန် Furstenberg
လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၏အဆိုအရသမိုင်းအလင်းခရီးသွားလာ3အဝတ်သေတ္တာပါဝင်သည်ဟု, စုဆောင်းခြင်းများထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ဆက်စပ်ပစ္စည်း Diane ဗွန် Furstenberg clutch အဖုံးများအကြားအထူးနေရာ, တကယ်တော့ဒီအိတ်သူ့ဟာသူ trendsetter ပိုလိုလားကြသည်။
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်များစုဆောင်းခြင်းအတွက်အသေးစားနှင့်အကြီးစားအိတ်အပြင်ပြောင်ပြောင်တောက်သောပိုးများနှင့် chiffon scarves, ပိုက်ဆံအိတ်, အမျိုးမျိုးသောအဆင်တန်ဆာ, လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်နေကာမျက်မှန်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦးကကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုး, တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အရာတစ်ခုခုကိုတက်ကောက်ဖို့အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများစျေးဝယ် enable ။
ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း - နွေရာသီ 2015
ဒင်ဗာမြို့မှ 2013 ခုနှစ် sundresses
အဘယ်အရာကိုဖက်ရှင်နွေရာသီ 2014 shoes?
ငွေကောက်ခံ Dior နွေ-နွေရာသီ 2013
ဖက်ရှင်ငန်းရှင်များ - Fall 2014
Mademoiselle ခိုခို Chanel
အဝါရောင်ခရမ်းချဉ်သီးပျိုးပင်, ဘာလုပ်ဖို့ - အကြောင်းရင်းကိုရှာပြီးချက်ချင်းပြဿနာကိုပြင်ပေးဖို့ဘယ်လို?
Kebab များအတွက် Stuffing
အရက်မူးယစ် - ကုသမှု
String သီအိုရီနှင့်ဝဠာ၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောရှုထောင့် - ၏တည်ရှိမှု၏အထောက်အထား
ဝဘ်အတွက်ပန်းသီးပင်ပေါ်မှာ Caterpillar တို့
ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏သတိပေးကြောင်းမခွဲခြားငရဲ 30, ဆိုဗီယက်ပိုစတာ!
မက္ကဆီကန်ပန်းချီဆရာများ၏ခေတ်သစ်အသက်တာ၏ 25 ဖြစ်ရပ်မှန်များ
အိမ်သာများအတွက် Air ကိုအမြင်ကြည်လင်စေရန်